Niala Tsiny i Etazonia Manoloana Ny Fisamborana Sy Fisavàna Nanaboridanana Ilay Diplomaty Indiana Devyani Khobragade · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2013 1:27 GMT
Mampiseho ireo fambara voalohany maneho ny fihenan-keriny ny fifandirana ara-diplomasia misy eo amin'i Inde sy Etazonia taorian'ny fisamborana ny Kaonsily lefitr'i India ao Etazonia noho ny fampiangana azy ho nanao visa hosoka.
Araka ny voatatitra dia naneho tamin'alahelo ny fomba nanaovana ny fisamborana an'i Devyani Khobragade, izay nasiana rojovy ampahibemaso ny 12 Desambra teo ivelan'ny fianaran-janany vavy tao Manhattan, ny Sekreteram-panjakana John Kerry tanatinà antso an-tariby ho an'ny mpanolotsainan'ny Fiarovam-pirenena ao India, Shiv Shankar Menon. Taoriana kely dia naboridana i Khobragade ary nalefa nokarohana hatramin'izay lavaka tamin'ny vatany sy ny fakana ny ADN-ny, ary notanana antranomaizina miaraka amin'ireo mpidoroka zava-mahadomelina sy ireo mpivarotena talohan'ny namoahana azy rehefa nandoa onitra mitentina 250.000 dolara Amerikana.
Niharan'ny fiampangana milaza fa nandainga mikasika ireo antontan-taratasy momba ny mpanampy an-tranony avy any India i Khobragade, izay nilaza fa hanarama azy 9.75 dolara Amerikana ny adiny iray raha toa ka manodidina ny telo dolara no tena vola azon'ilay vehivavy. Raha voaheloka izy, dia mety higadra maherin'ny folo taona an-tranomaizina.
Tamin'ny hatezerana no nitsenan'ny ao India ny fomba nitondrana an'i Khobragade. Novalian’ny governemanta tamin'ny fanenana ireo tombotsoan'ny diplomaty Amerikana ao India izany ary koa ny fangatahana ny fampahalalana tahàka ny vola omena ireo mpiasa Indiana rehetra ao amin'ny masoivoho ary ahitana hatramin'ireo mpamafa tranon'izany mpiasan'ny masoivoho izany. Nanakana ireo fahazoan-dàlana hanafatra entana avy any ivelany ihany koa ny governemanta, isan'izany ireo zava-pisotro misy alikaola rehetra ho an'ny mavoisovohon'i Etazonia.
Nanameloka mafy ny fomba fikarakarana an'i Khobragade ireo mpikambana ao amin'ny parlemantan'i India. Ny mpitarika an'ilay antoko mpanohitra lehibe indrindra, ny Antoko Bharatiya Janata aza dia nanome sosokevitra ny hamalian'ny firenena faty ka hisamborana ireo diplomaty pelaka rehetra avy any Etazonia ao India. Namerina nanambara ny fandraràna ny olona tia ny mitovy fananahana aminy ny Fitsarana Avon'i India tamin'ny herinandro lasa teo.
Mandra-pifonan'i Kerry, nanome toky ireo manam-pahefana Amerikana fa hamerina handinika ireo fizotra, saingy nijanona tamin'ny fanehoany alahelo manoloana io fisamborana io, izay vao mainka nampitroatra an'i India.
Manome baiko mahabe resaka i India, toy ny fanaisorana ireo sakana fiarovana manoloana ny masoivohon'i Etazonia ho valifaty taorian'ny nisamborana ny diplaomaty Indiana tany New York. Sary an'i Shweta Bajaj. Fizakàmanan Demotix (17/12/2013)
Nanazava ny tsy fahampian'ny asa saina tanatin'ny lalàna Amerikana manoloana ireo diplaomaty ny mpanoratra Rajeev Sharma tanatinà lahatsoratra ho an'ny vohikala mpampita vaovao “First Post”:
Raha toa i Etazonia ka nametraka ny lalànany tany am-pototra naraham-panajana ireo firenena 194 rehetra hananany fifandraisana ara-diplomatika ary avy eo tsy maintsy hanisy rojovy sy hanagadra diplaomaty an-jatony izy, ary mety hatetika loatra izany. Izany dia satria ny karama ambany indrindra apetrak'ireo lalàna Amerikana ho an'ireo olona karamain'ireo iraka avy any ivelany dia toa mbola midangana lavitra noho ny karaman'izy ireo manokana.
Ny fanontaniana dia hoe ahoana no ahafahan'i Khobragade mandoa ny mpiambina an-janany $ 4500 isam-bolana raha toa ka $ 4120 isam-bolana no karamany, teboka iray nambaran'ny rainy Uttam Khobragade, mpiasa efa misotro ronono avy tao amin'ny IAS . Teboka iray lehibe izay ilain'i Washington jerena izany, satria tsy tantaran'i India irery.
Nampangaina ho nanao visa hosoka i Khobragade, fiampangana izay mbola tokony hoporofoina. Na dia voaporofo aza izany, fiampangana tena henjana ve izany ka hangejana rojovy azy sy hanagadràna azy?
Namelively mafy an'io fisamborana io ny mpanoratra S. K. Shah tao anatin'ny bilaoginy:
Henatra sy fahafaham-baraka ho an'ny Diplaomatintsika, ny fomba nanaovana an'i Devyani tany Etazonia. Mila mamerina ny fahamendrehan'i India feno ny Govt -n'i India.
Na izany aza, nandinika ireo fiampangana an'i Khobragade i Sandip Roy tanatinà lahatsoratra ho an'ny First Post:
Amin'ny maha-mpikambana an-dRtoa Khobragade ao amin'ny masoivoho misolotena an'i India any ivelany, dia manana zo maro izy. tsy iray amin'izany kosa anefa ny zo hanana mpanampy an-trano aminà karama ahena.
Niteraka fihetseham-po tao amin'ny Twitter ny fisamborana ilay diplaomaty, na izany naneho fanohanana azy, na fanoherana azy. Nanoratra i Shubhashish, mpanao gazety avy any Londona:
Nanitsakitsaka ny fepetra ara-diplaomatika i Etazonia ary i Khobargade kosa nanararaotra ny toerany tsy niraharaha ny lalàna Amerikana. Smy diso. Samy tokony hiaiky ny roa tonta
Nitoraka bitsika ilay mpanao gazety, Sudarshan Kumar, mipetraka any Mumbai:
Talanjona amin'ireo famindran'ny govt Indiana manoloana ny raharaha Devyani Khobragade…hatreho i Etazonia..
— Sudarshan Kumar (@sudarshankr) 17 Desambra 2013
Mandray io fisamborana io ho toy ny famborahana ireo lalàna tsy marim-pototr'i Etazonia ilay mpanolotsaina sady mpaka sary Smita Barooah:
Ny politika mitombon'i Etazonia: ny vondron-dalàna iray ho an'ny vahoakany manokana. Ny vondron-dalàna iray hafa kosa ho an'ny ambin'izao tontolo izao. Ohatra iray fotsiny i Devyani Khobragade
— Smita Barooah (@smitabarooah) 17 Desambra 2013
Niaro an'ilay mpanampy an-tranon'i Khobragade ny mpampiasa Twitter, Anvesha, mikasika ny karamany varimasaka:
Tsy manamarina ny fitondrana ratsy hitsikerana azy any Etazonia ny fifandraisana ara-politika na ny zavatra eo am-pelantanany tany India. Izany no tsipika mametra farany.
— Anvesha (@anveshaq) 18 Desambra 2013
Nanoratra ny mpampiasa Twitter Shyam Srikumar:
Rehefa tsy afaka manaràma mpiambin-jaza ianao, aza manaràma. Tsy vahaolana ny fandikan-dalàna. Na oviana na oviana ho anà diplomaty. http://t.co/RkabU7K8CJ via @ibnlive
— Shyam Srikumar (@shyamsrikumar) 17 Desambra 2013
Mandritra izany fotoana izany, nafindra tany amin'ny iraka diplaomatika any New York i Devyani Khobragade, izay manome azy fiarovana ara-diplomatika.